7 zvinokwezva izvo zvinoita kuti iwe ude kushanyira maPeru emaAmazon
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » 7 zvinokwezva izvo zvinoita kuti iwe ude kushanyira maPeru emaAmazon
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • Peru Kuvhuna Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
MaAmazon kuchamhembe kwePeru anodonha nesango rakasvibira remvura, makomo ane makomo, mipata yakadzika, migero yemvura, uye zvisaririra zveInc-prean.
Amazonas inharaunda yekuchamhembe kwePeru inodonha nesango rakasvibira remvura, makomo ane makomo, mipata yakadzika, makoronga erwizi, uye akawanda akasara eIncan neIncan masara. Iyi inharaunda iwe yaunoda kushanyira paunenge uchifamba uye uchienda kuzororo kuPeru.
Hezvino zvese zvaunoda kuti uzive nezveAmazonas uye ayo anonakidza zvinokwezva usati wafunga mafambiro ako:
Pasina mubvunzo nzvimbo inocherwa pasi pekuchera matongo muPeru, Kuelap iguta rekare rakakomberedzwa nemasvingo riri kumaodzanyemba kweAmazonas Yakavakwa neChachapoyas (vakararama panguva yeIncan Empire) muzana ramakore rechitanhatu CE, saiti iyi ikozvino ine matongo makuru ezvivakwa zvekare zvematombo nedzimba dzeCloud Warriors. Yakakomberedzwa nemasango akadzika gore, nhare yematombo yakatokura kupfuura yakakurumbira Machupicchu.
Guta guru renharaunda yeAmazonas, Chachapoyas iguta rinoyevedza iro rinoshanda senzira yekuenda kumatongo ekuchera matongo eChachapoyas tsika uye zvimwe zvinokwezva nzvimbo munzvimbo iyi. Taundi inzvimbo yakanaka yekugara; iri pakakwirira mamita 2,335, ine mamiriro ekunze akanaka, ari pakati nepakati. Guta pacharo rine mashoma anonakidza nzvimbo dzevashanyi dzakakodzera kushanyira.
Kukwira kwehafu nehafu kweawa kana kukwira bhiza kubva kuguta reChachapoyas kuburikidza nenzvimbo inoshamisa uye isinganzwisisike yeAmazonas inokutora iwe kuenda kune chimwe chezvishamiso zvePeru - iyo Gocta mapopoma. Kusvetuka kubva pakukwirira kwemamirimita mazana manomwe negumi nenomwe, Gocta ndeimwe yemakona marefu kwazvo pasi rose. Nekuda kwenzvimbo yayo yepamusoro-soro (771 masl), iyo mapopoma inonakidzwa neyekurota gore rakafukidza dzimwe nguva. Vagari vemo vanotenda kuti mapopoma acho anodzivirirwa nemweya wakaita kunge mermaid.
Caverna de Quiocta muAmazonas ndeimwe inonyanya kukanganwa kukwezva kwevashanyi muPeru. Yakavakirwa padyo netaundi diki reLamud, iyo yakanyorova uye ine matope mapako echisikigo ane akajeka stalactite uye stalagmite mafomu. Iyo saiti chikamu chemaawa gumi anotungamirwa kubva kuguta reChachapoyas.
5. Tarisira Sarcophagi
Kune chinhambwe chemakiromita makumi mana nemasere kubva kuguta reChachapoyas, kune imwezve inonakidza nzvimbo yekuchera matongo yetsika yeChachapoyas iyo isingashanyirwe nevashanyi vekunze. Tarisira, kana Karijia, weUtcubamba Valley muAmazonas inzvimbo yakawanikwa mummies masere eChachapoyan kana sarcophagi akagadzirwa nevhu, zvimiti, nehuswa. Iwo mammmy, ayo ari kabhoni-akanyorwa kuzana ramakore regumi nesere, akasarudzika mukugadzirwa uye akasiyana zvakanyanya kubva mumammy emuIjipita.
6. Laguna yeCondors
ILaguna yeCondors inozivikanwa zvakare seLaguna de las Momias (Lagoon yeMummies) nekuda kwekufukunurwa kwemammy kubva mudunhu rino. Inowanikwa mudunhu reLeimebamba, nzvimbo iyi izere nemapango echisikigo mausoleum eChachapoyan tsika ayo ane mammies akaputirwa mumachira uye akagara munzvimbo yakasarudzika. Iwo madziro ebako akapendwa nezviratidzo kana mapikicha.
Kushanya kwako kuAmazon hakuzove kwakakwana pasina kushanya kune ino diki mamuseum, iyo inonyatso chengetedza nhoroondo yemuno netsika dzetsika. Maawa mashoma kubva kuChachapoyas, miziyamu iri mutaundi rekumaruwa reLeimebamba yakavakwa kuburikidza nekubatana kunoshanda pakati penzvimbo dzenzvimbo, nyanzvi dzakasiyana siyana, pamwe nemasangano epasirese ekubhadhara mari. Iyo inochengetera mummies uye imwe hupfumi yenguva yeInca-Chachapoya. Iyo miziyamu inodada inodada nekuunganidzwa kwayo kwema200 mummies uye zvisaririra zvekuchera matongo kubva kuLaguna yeCondors.